Developmental Milestones (Newborn to 6months) - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကလေးငယျမြားနှငျ့ ပုံမှနျကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးမှု ( အပိုငျး ၁ – မှေးကငျးစမှ ခွောကျလအထိ)
ကလေးငယျကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးမှုဟုဆိုလိုကျလြှငျ လူအမြားက ကလေးငယျ၏ကိုယျအလေးခြိနျ မညျမြှပိုလာသညျ၊ အရပျမညျမြှရှညျလာသညျကိုသာ တှေးမိကွပမေညျ။ ထိုသညျမှာကွီးထှားမှုဖွဈသညျ။ ကွီးထှားမှုနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးမှု မတူညီ ဟူသညျ့အခကျြကို သိရှိထားသငျ့ပသေညျ။
ကွီးထှားမှုနှငျ့ ဖှံ့ဖွိုးမှု ဘာတှကှောသလဲ ?
ကွီးထှားမှုဆိုသညျမှာ ခန်ဓာကိုယျရှိဆဲလျ (cells) ကလာပျစညျးမြား ပှားမြားလာပွီး ရုပျပိုငျးဆိုငျရာကွီးထှားလာခွငျးကို ဆိုလိုသညျ။
ဖှံ့ဖွိုးမှုဆိုသညျမှာ အာရုံကွောစံနဈရငျ့သနျလာခွငျးကွောငျ့ ခန်ဓာကိုယျလုပျဆောငျခကျြမြား ပိုမိုမြားပွားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာခွငျးကို ဆိုလိုသညျ။
ကွီးထှားမှုနှေးကှေးပါက မွငျသာထငျသာဖွဈသောကွောငျ့ မိဘမြားက ပို၍သတိထားတတျကွသျောလညျး ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျမှု နှောငျ့နှေးနပေါက အလှနျနောကျကမြှသိရတတျသောကွောငျ့ မလိုလားအပျသောဆိုးကြိုးမြား ဖွဈစတေတျပါသညျ။
မှေးကငျးစကလေးငယျတဈယောကျသညျ ပုံမှနျအားဖွငျ့ ကိုယျအလေးခြိနျ ၅ပေါငျခှဲမှ ၉ပေါငျအတှငျးရှိတတျပါသညျ။ မှေးစမှ တဈပတျ၊ ဆယျရကျအတှငျး ကလေးငယျ၏ ကိုယျအလေးခြိနျ ကသြှားတတျပွီး နောကျပိုငျးမှ ပွနျလညျတကျလာမညျဖွဈပါသညျ။
အကွမျးဖငျြးအားဖွငျ့ ကလေးငယျအသကျ သုံးလပွညျ့တှငျ မှေးစကထကျ ကိုယျအလေးခြိနျ နှဈဆတကျလာသငျ့ပွီး အသကျခွောကျလတှငျ နှဈဆခှဲခနျ့၊ အသကျတဈနှဈပွညျ့တှငျ သုံးဆခနျ့ ပိုမြားလာသငျ့ပါသညျ။
မှေးကငျးစမှ အသကျသုံးလအတှငျး စိတျပိုငျးဆိုငျရာဖှံ့ဖွိုးမှုအားဖွငျ့ ကလေးငယျသညျ
စိတျဝငျစားဖှယျ အသံတဈခုခုကွားလြှငျ အမူအယာတဈမြိုးပွောငျးသှားခွငျး
မွှူလိုကျလြှငျ ပွနျလညျပွုံးပွတတျခွငျး တို့ရှိနသေငျ့ပါသညျ။
အာရုံကွောစံနဈကွံ့ခိုငျမှုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာခွငျးအနဖွေငျ့လညျး အသကျသုံးလပွညျ့ပွီးနောကျပိုငျးတှငျ ကလေးငယျ၏ ဦးခေါငျးကို ကိုငျထားစရာမလိုဘဲ မတျမတျထူနနေိုငျခွငျးဖွငျ့ သိနိုငျပါသညျ။
ကလူ၏သို့ မွှူ၏သို့ဖွငျ့ မိသားစုဝငျမြားနှငျ့ ပတျဝနျးကငျြအား စိတျဝငျစားလာအောငျပွုလုပျပေးခွငျး တို့ဖွငျ့ ပံ့ပိုးရပါမညျ။
မှောကျခုံမှပကျလကျ၊ ပကျလကျမှမှောကျခုံ အနအေထားပွောငျးတတျလာခွငျး
ကလေးအားစကားပွောပေးပွီး (ဘဘ၊ မမ အစရှိသော) လှယျကူသောအသံမြား ပွောလာနိုငျအောငျကူညီပေးခွငျး စသညျတို့ဖွငျ့ ပံ့ပိုးပေးရပါမညျ။
အကယျ၍ ကလေးငယျသညျ အသကျခွောကျလအရှယျအထိ
မှောကျခုံ၊ ပကျလကျ အနအေထားပွောငျးတတျမှုမရှိလြှငျ
ခန်ဓာကိုယျတောငျ့တငျးလှနျးလြှငျ၊ ပြော့ခှနေလှေနျးလြှငျတော့ ဖှံ့ဖွိုးမှုနှေးကှေးခွငျးရှိနနေိုငျတဲ့အတှကျ ကလေးဆရာဝနျနှငျ့ ပွသသငျ့ပါသညျဟု အကွံပွုရငျး
ကလေးငယ်များနှင့် ပုံမှန်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု ( အပိုင်း ၁ – မွေးကင်းစမှ ခြောက်လအထိ)
ကလေးငယ်ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုဟုဆိုလိုက်လျှင် လူအများက ကလေးငယ်၏ကိုယ်အလေးချိန် မည်မျှပိုလာသည်၊ အရပ်မည်မျှရှည်လာသည်ကိုသာ တွေးမိကြပေမည်။ ထိုသည်မှာကြီးထွားမှုဖြစ်သည်။ ကြီးထွားမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု မတူညီ ဟူသည့်အချက်ကို သိရှိထားသင့်ပေသည်။
ကြီးထွားမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု ဘာတွေကွာသလဲ ?
ကြီးထွားမှုဆိုသည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ် (cells) ကလာပ်စည်းများ ပွားများလာပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးထွားလာခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုသည်မှာ အာရုံကြောစံနစ်ရင့်သန်လာခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ဆောင်ချက်များ ပိုမိုများပြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
ကြီးထွားမှုနှေးကွေးပါက မြင်သာထင်သာဖြစ်သောကြောင့် မိဘများက ပို၍သတိထားတတ်ကြသော်လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှောင့်နှေးနေပါက အလွန်နောက်ကျမှသိရတတ်သောကြောင့် မလိုလားအပ်သောဆိုးကျိုးများ ဖြစ်စေတတ်ပါသည်။
မွေးကင်းစကလေးငယ်တစ်ယောက်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန် ၅ပေါင်ခွဲမှ ၉ပေါင်အတွင်းရှိတတ်ပါသည်။ မွေးစမှ တစ်ပတ်၊ ဆယ်ရက်အတွင်း ကလေးငယ်၏ ကိုယ်အလေးချိန် ကျသွားတတ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှ ပြန်လည်တက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ကလေးငယ်အသက် သုံးလပြည့်တွင် မွေးစကထက် ကိုယ်အလေးချိန် နှစ်ဆတက်လာသင့်ပြီး အသက်ခြောက်လတွင် နှစ်ဆခွဲခန့်၊ အသက်တစ်နှစ်ပြည့်တွင် သုံးဆခန့် ပိုများလာသင့်ပါသည်။
မွေးကင်းစမှ အသက်သုံးလအတွင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုအားဖြင့် ကလေးငယ်သည်
စိတ်ဝင်စားဖွယ် အသံတစ်ခုခုကြားလျှင် အမူအယာတစ်မျိုးပြောင်းသွားခြင်း
မြှူလိုက်လျှင် ပြန်လည်ပြုံးပြတတ်ခြင်း တို့ရှိနေသင့်ပါသည်။
အာရုံကြောစံနစ်ကြံ့ခိုင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းအနေဖြင့်လည်း အသက်သုံးလပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကလေးငယ်၏ ဦးခေါင်းကို ကိုင်ထားစရာမလိုဘဲ မတ်မတ်ထူနေနိုင်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပါသည်။
ကလူ၏သို့ မြှူ၏သို့ဖြင့် မိသားစုဝင်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အား စိတ်ဝင်စားလာအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း တို့ဖြင့် ပံ့ပိုးရပါမည်။
မှောက်ခုံမှပက်လက်၊ ပက်လက်မှမှောက်ခုံ အနေအထားပြောင်းတတ်လာခြင်း
ကလေးအားစကားပြောပေးပြီး (ဘဘ၊ မမ အစရှိသော) လွယ်ကူသောအသံများ ပြောလာနိုင်အောင်ကူညီပေးခြင်း စသည်တို့ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးရပါမည်။
အကယ်၍ ကလေးငယ်သည် အသက်ခြောက်လအရွယ်အထိ
မှောက်ခုံ၊ ပက်လက် အနေအထားပြောင်းတတ်မှုမရှိလျှင်
ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းလွန်းလျှင်၊ ပျော့ခွေနေလွန်းလျှင်တော့ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးခြင်းရှိနေနိုင်တဲ့အတွက် ကလေးဆရာဝန်နှင့် ပြသသင့်ပါသည်ဟု အကြံပြုရင်း